FARXIYA FISKA 2019
Awoodda NPMA waxay ku jirtaa awoodeena inaan ku soo wada ururinno dhammaan ciyaartoyda muhiimka ah ee maaraynta cayayaanka sanad walba PestWorld. Maaddaama ay tahay dhacdadii ugu ballaadhnayd ee maaraynta cayayaanka adduunka lagu arko ma jiro madal fiican oo aad adigu ku bilaabi karto adeegyo iyo alaabooyin cusub oo aad ku dhiirrigelin karto ...Akhri wax dheeraad ah »
Telex Environmental Trading Co., Ltd. (A Jinglong laan) ayaa ku biiray NPMA.
Horumarinta Jinglong, isbarbar dhigayaga waxaa aqbalay macaamiil aad iyo aad u tiro badan oo adduunka ah. Waa waqtigii saxda ahaa ee socoshada la sii wadi lahaa! Jinglong (Telex) had iyo jeer wuu joogi doonaa markasta oo aad u baahato! Akhri wax dheeraad ah »
FAOPMA 2019 - Kuuriya
Ku soo dhawow inaad la kulanto Jinglong at FAOPMA 2019. Qaar ka mid ah alaabooyinka cusub ayaa soo bixi doona. Macluumaadka waabku waa sida hoos ku xusan: Booth: A06 Taariikhda: 24 (Talaado) - 26 (Khamiis) Sebtember, 2019 Goobta: Hoolka Bandhigga 1F, DCC (Xarunta Shirarka Daejeon), Daejeon, Korea Akhri wax dheeraad ah »
Bandhigga PestEx 2019
Ururka ugu weyn ee la dagaalanka cayayaanka ee Boqortooyada Midowday oo matala 700 oo shirkadood oo xubin ka ah isla markaana la xiriiro 3,000 Shirkado. Dhacdooyinkayaga waxaa lagu dhiirrigeliyaa dhammaan joornaalada warshadaha ka hortagga cayayaanka, iyo sidoo kale qaybo badan oo la xiriira. Akhri wax dheeraad ah »
Daabacaadda 6-aad ee Bandhigga Xakamaynta Cayayaanka Talyaaniga wuxuu ka dhici doonaa 06th iyo 07th Maarso 2019 gudaha Xarunta Shirarka ee caanka ah ee Milan (MiCo 1st floor) Saacadaha furitaanka: Arbaco Maarso 06th 2019 laga bilaabo 9.00 subaxnimo ilaa 6.00 galabnimo Khamiista Maarso 07 2019 laga bilaabo 9.0 ...Akhri wax dheeraad ah »
Kaqeybgal Parasitec Paris 2018 Ogast 30, 2018
Goobta cusub ayaa ah shaybaarka ugu fiican shirkadaha adeegga ka hortagga cayayaanka iyo qeybiyeyaasha. Iyadoo lala kaashanayo xirfadlayaal xirfadlayaal ah iyo soosaarayaal ka socda ilaa 30 dal, Parasitec Paris, oo in ka badan 2,800 soo booqday intii lagu jiray shirkii ugu dambeeyay, waxay sii ahaaneysaa tixraac loogu talagalay ...Akhri wax dheeraad ah »
Shirka Caalamiga ah ee Tayada Badbaadada Cuntada ee Shiinaha 2018
11-kii sano ee la soo dhaafay, Shirka CIFSQ wuxuu si wada jir ah u soo jiitay in ka badan 8,000 oo xirfadlayaal ah badqabka cuntada iyo khabiiro ka socda 30 + dal. Waxaan rajeyneynaa inaan kugu soo dhaweyno 2018. Kaqeybgalka Shirka Caalamiga ah ee Cunnada & Tayada Cuntada ee Shiinaha (CIFSQ) waa mid ...Akhri wax dheeraad ah »
Waxaan Kusoo Bandhigeynaa FAOPMA 2018 Sebtember
Xiriirka Maareeyayaasha Cayayaanka Aasiya iyo Oceania waa urur aan faa'iido doon ahayn oo ay aasaaseen 1989 xubna ka socda waddamada Aasiya iyo Badweynta si kor loogu qaado loona horumariyo warshadaha maaraynta cayayaanka xirfadleyda ah ee gobolka oo dhan. ...Akhri wax dheeraad ah »